Geedaha | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Sawirrada dhirta - ku raaxee dabeecada wicitaanka
Bogag badan oo ku saabsan dhirta
Sawirada dhirta hooyga
Dhirta, xoortay, cawska iyo geedaha - dhammaantood waa qeyb ka mid ah dabeecadeena quruxda badan. Dad badan, waxay muujinayaan muuqaal qurux badan waxayna abuurayaan jawi deggan, xataa xitaa nolol maalmeedka xNUMX. Century.
Dhirta - Goobaha ugu quruxda badan ee dabiiciga ah
Kaliya fiiri magaalooyinka waaweyn ee meerkeena. Xitaa magaalada New York, siyaabo ka mid ah "hooyada" dhamaan magaalooyinka waawayn, waxaa jira cufan weyn oo cagaaran oo wanaagsan oo ah qaabka Central Park.
In meel weyn in mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee dunida waxaa loo isticmaalaa park ah oversized oo sidaas ooy goobta dhismaha dheeraad ah xafiisyada iyo buulasha, muhiimadda ay leedahay dhirta iyo dabiiciga ah waxay muujinaysaa guud ahaan.
Laakiin ka soo laabashada New York City ilaa magaalooyinka iyo tuulooyinka ee dalkeena. Dad badan ayaa muhiim u ah beerta iyo jawiga cagaaran markay raadinayaan guri ama guri. Wax yaab leh, ka dibna dhan, waxaad dareemeysaa mid aad u raaxo leh ee beerta ubax leh ubaxa, aad nasato oo aad illowdo welwelka nolosha nolol maalmeedka.
Xilliyadaha - qaab cajiib ah
Laakiin ma aha oo kaliya xagaaga ayaa ka dhigaysa wadnahayaga si deg deg ah. Xilli walba wuxuu leeyahay jilitaankiisa iyo jilitaankiisa. Xeebaha barafka iyo dhirta jiilaalku waxay raacaan badda oo ah huruud, huruud ah iyo casaan xilliga dayrta. Marka ay mar kale soo kululaadaan, burooyinkeeda kowaad waxay ka soo baxaan dhirta qaawan iyo dhirta ugu horreysa waxay bilaabaan in ay furtaan quruxooda.
Xitaa afartan darbigood, waxaanu kaliya u diideynaa inaan sameyno waxoogaa dabiici ah. Laga bilaabo dhirta biyaha geed- yar oo quraaradda qolka Timir dheer u badan tahay in kasta oo naga mid ah dhirta sida decoration ee guriga. Oo gebi ahaanba ku saabsan nooca, haddii oo kaliya dhalmo macmal ah oo ah qaab dhirta aan dabiici ahayn, yar oo naga mid ah doonayo inaan ka maqnaado.
Ma ahan wax, sawiro farabadan oo badan ayaa lagu sameeyaa dabeecada midabka leh. Laakiin xitaa sawirada oo kaliya ku dhacaya dabeecadeena quruxda badan, waxay leeyihiin rafcaan aad u gaar ah, mana ahan oo kaliya aqallo badan oo ka mid ah guriyahayaga. Gaar ahaan kumbuyuutarka ama sawirrada casriga ah ee dhirta iyo geedaha ayagu yihiin kuwo aad u faraxsan oo keliya isticmaalka.
Sababtan awgeed, waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno xulasho wanaagsan oo ah sawirrada dhirta hoose.
Dabcan, sawiradu si buuxda uma beddeli karaan dabeecada dhabta ah. Haddii aad rabto in aad la kulanto dabeecada midabka leh ee kala duwan ee dabeecadeeda, waa inaad tagtaa hawada cusub. Si kastaba ha ahaatee, sawirrada dhirta ku yaal boggayagu waxay ku habboon yihiin xilliyada qaboobaha iyo calool-xumada waxayna sidoo kale keeni karaan dabeecadda dabiiciga ah ee dadka ka soo jeeda magaalada weyn ee aan ku noolayn baadiyaha.
Thistle leh shinni